Clone (format virus harddisk) — MYSTERY ZILLION
Clone (format virus harddisk)
July 2010 edited January 2011 in Hardware
မသိလို့မေးချင်လို့ပါ ဖြေပေးပါနော် ကျွန်တော်တို့ clone ရိုက်ချင်တယ်ဗျာ ရိုက်မယ့်စက်က virus ရှိနေတယ် အဲဒါကိုclone ရိုက်ချင်ရင် virus အရင်ဆုံးသတ်ရမလား.. ဒါမှမဟုတ် window အသစ်တင်စရာလိုလား ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲဲ့ clone ရိုက်လိုက်လို့ရပြီလား အဲလိုရိုက်လိုက်ရင် virus တွေ ဘာတွေညာတွေ အကုန်လုံး ရှင်းသွားမလား အဲဒါလေး သိချင်လို့ပါ ဖြေပေးပါအုံးနော် (harddisk အသစ်နဲ့ ရိုက်မှာပါ ခုမေးတာက အဟောင်းကိုပါ) :?
အစ်ကို clone ရင်တော့ အကုန်ပါလာမှာပါပဲ virus တင်မကဘူး ရှိသမျှ Error ပါပါလာမှာလေ
ရှင်းရှင်းလေး ပြန်ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အသစ်တင်ပြီးတော့ သေချာပြန်လုပ်ပြီးမှ clone တာပိုကောင်းတယ်ဗျ
clone ရိုက်မှတော့ virus တွေဘာတွေရှိနေရင် ပါလာမှာပဲလေ
အကောင်းဆုံးကတော့ virus အရင်သတ်၊ သတ်မရရင် windows အသစ်တင်ပြီး clone ရိုက်လိုက်ပါ
မဟုတ်ဘူးဗျ ကျွန်တော်ပြောတာက clone ရိုက်မှာက အဟောင်းကို ယူမှာက အသစ် နားရှုပ်သွားပြီလား မသိဘူး
harddisk အသစ်မှာ အကုန်လုပ်ပြီးတော့်လေ အဟောင်းကိုရိုက်မှာ အဲဒါဆိုရင် အဟောင်းက virus တွေလညး် ကုန်သွားမှာလား အသစ်အတိုင်းဖြစ်မှာလား window ပြန်တင်စရာလိုသေးလားလို့မေးတာပါဗျာ
hard disk အသစ်မှာ အကုန်လုပ်ပြီးတော့်လေ အဟောင်းကိုရိုက်မှာ အဲဒါဆိုရင် အဟောင်းက virus တွေလညး် ကုန်သွားမှာလား အသစ်အတိုင်းဖြစ်မှာလား window ပြန်တင်စရာလိုသေးလားလို့မေးတာပါဗျာ
အားလုံးကိုရှုပ်နေတာပဲ . .:rolleyes::redface: . . ဒီလိုလေးရှင်းကြည့်မယ် . .ဟုတ်မလားတော့မသိဘူး . .(၁)hard disk အဟောင်းမှာ virus ရှိနေတယ် . . . (၂) harddisk အသစ်ကို window အသစ်တင်မယ် (၃) အဟောင်းကို format ချမယ် . .(၄) အသစ်က window ကို အဟောင်းဆီသို့ clone လုပ်မယ် . . . :biggrin:. .အဲ့ဂလိုလားတော့မသိဘူး . . အဲ့ဒီအတိုင်းဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ် . . . hard disk အဟောင်းမှာ C ကိုပဲ format ချမယ်ဆိုရင်တော့ D မှာ virus ကျန်နိုင်ပါတယ်. . .
အင်း ၀င်ရှာရှည် လိုက်အုံးမယ် မပြောဖြစ်တာတော့ ကြာပါပြီ.......clone ရိုက်မယ်ဆို source drive နဲ့ destination drive ကို မမှားပါစေနဲ့...... ရိုက်ဖူးတယ်ဆို ရင်တော့ sorry ပါ........virus ရှိတဲ့ destination drive ကို အရင် format ရိုက်လိုက်ပါ......board မတူရင်တော့ driver ပြန်တင်ရပါမယ်....windows7မဟုတ်ခဲ့ရင်ပါ......
အစ်ကိုတို့ရေ clone ရိုက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ ။ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ။ကျနော်သိမ်နားမလည်လို့ပါခင်ဗျာ။
ဆရာကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ clone ရိုက်တယ်ဆိုတာ window .driver .application တွေရှိပြီးသား hard disk တစ်လုံးကို နောက်ဘာမှမရှိသေးတဲ့ hard disk အသစ်တစ်လုံးမှာ copy ပွားလိုက်တာပါ။
ရိုက်သာရိုက် ။ အဟောင်းမှာရှိတဲ ့virus လည်းမရှိတော ့ဘူး။
Clone ရိုတ်ရင် hard disk နာတယ်လိုပြောကြပါတယ်.. ဟုတ်လားတိ၀ူး
ပြီးတော 4g မန်မိုရီစတစ် နဲ. ရောရိုတ်လိုရနိုင်လားမသိဘူးး.......